उत्पदान हुन थाल्यो ड्रागन फ्रुट - DURBAR TIMES
HomeUncategorizedउत्पदान हुन थाल्यो ड्रागन फ्रुट
उत्पदान हुन थाल्यो ड्रागन फ्रुट
प्युठान | सरुमारानी गाउँपालिका वडा नं. २ दर्भानमा व्यवसायिक रुपमा खेती थालिएको ड्रागन फ्रुटले उत्पादन दिन शुरु गरेको छ ।
व्यवसायमा तीन जनाले हाम्रो बहुउदेश्यीय कृषि फर्म दर्ता गरी करिब २५ लाख रुपिँया लगानी गरेका थिए । दुबै क्षेत्रमा गरी एक हजार दुई सय बोट ड्रागन फ्रुट लगाईएको छ भने अरु बोट अम्बा र बयर लगाएको केशरबहादुर गुरुङले बताए । उनका अनुसार ड्रागन फ्रुट भारतको गुजरात, अम्बा तामिलनाडु र वयरको बेर्ना कलकत्ताबाट खरिद गरी ल्याइएको हो ।
प्यूठान दर्भानका केशरबहादुर गुरुङ, दाङका हिरामणी पौडेल र रुपन्देहीका खुमानन्द भुसाल मिलेर व्यवसायिक रुपमा ड्रागन फ्रुटको खेती गरेका हुन् । प्यूठानको दरभान सहित दाङको राप्ती गाउँपालिका वडा नं. २ लालमटिया ड्रागन फ्रुट सहित अम्बा र वयर खेती गरेको सञ्चालक केशरबहादुरले बताए । दर्भानमा करिब २० रोपनी र लालमटियामा एक बिगाह क्षेत्रफलमा खेती गरिएको छ ।
ड्रागनले यही साउन देखी फल समेत दिन सुरु गरेको हो । हालसम्म करिब १ क्विन्टल फ्रुट विक्रि समेत गरिसकेको उनले बताए । पहिलो वर्ष केही कम मात्रामा फल दिएपनि अबका वर्षमा राम्रो फल्ने उनले बताए ।
फर्ममा रातो र सेतो गरी दुई थरीको ड्रागन फ्रुट उत्पादन भएको छ । रातोलाई प्रति केजी ८ सय रुपिँया र सेतोलाई प्रतिकेजी ७ सय रुपिँयामा विक्रि गर्दै आएको उनले बताए । उत्पादित फ्रुट माग अनुसार जिल्लासँगै वुटवल, काठमाडौंमा खपत भइरहेको छ । ड्रागनसंगै अम्बा, वयरले समेत फल दिन सुरु गरेको र विक्रिवितरण समेत गर्दै आएको उनको भनाई छ ।
Previous article२४ घण्टामा नेपालमा १४ सय ९७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, उपत्यकामा ७ सय ५५
Next articleसाैगात र रविन्द्रलाई लिएर फेरी पर्दामा उदाउँदै आकाश